Neeraj Mehta wuxuu ku biiray Machadka McKnight ee 2018 oo ah agaasimihii ugu horreeyay ee barashada. Doorkan, Mehta wuxuu taageeraa sida dadaalkeena barnaamijyadeenu u adeegsado barashada istiraatiijiyadeed iyo waxqabadka la-qabsiga si loo kiciyo saameyn weyn, si fiican loo fahmo isbeddelka adag iyo naqshadeynta, iyo loo beddelo istiraatiijiyadeena.
Kahor McKnight, Mehta wuxuu maamule ka ahaa barnaamijyada bulshada ee Xarunta Magaalada iyo Arimaha Gobolka Jaamicada Minnesota, taageerida isgoysyada cadaalada cilmi baarista iyo abaabulka bulshada iyadoo lala kaashanayo ururada ku saleysan bulshada iyo dowlada guud ahaan Minnesota. Wuxuu ka soo shaqeeyey xubin ka mid ah macalimiinta iskuulka Humphrey ee Arimaha Bulshada, koorsooyinka waxbarista ee diirada lagu saaray qorshaynta magaalooyinka ee sinnaanta iyo dib u soo nooleynta xaafadaha. Mehta sidoo kale wuu ka shaqeeyey Nexus Community Partners, halkaas oo uu ka caawiyay hogaaminta ballaarinta shaqadeeda waqooyiga Minneapolis sanadihii 2008 ilaa 2012. Wuxuu hadda ka shaqeeyaa guddiga TU Dance ee St. Paul, Minnesota.
Mehta wuxuu shahaadada koowaad ee bachelorka ka qaatay injineernimada madaniga ee jaamacada Minnesota iyo shahaadada mastarka ee siyaasada guud ee jaamacada Minnesota ee Hubert H. Humphrey School of Public Affairs. Waxaa la gudoonsiiyay Shahaadada Hoggaanka Bush Foundation Leadership ee 2011. Mehta wuxuu aad u jecelyahay dhisida bulshooyin xoog badan, caafimaad qaba, oo ka siman meel kasta, laakiin gaar ahaan waqooyiga Minneapolis, oo uu kula nool yahay xaaskiisa iyo labadiisa wiil.
By Neeraj Mehta Febraayo 2019